Kenya: Tirinta Cododka Doorashada Madaxweynaha oo socota & Rabshadihii dhacay. |
Kenya: Tirinta Cododka Doorashada Madaxweynaha oo socota & Rabshadihii dhacay.
Nairobi(GNN):-Madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta ayaa muuqata inuu si weyn ugu guuleysan doono codbixintii kuceliska ahayd ee doorashada Madaxweynaha Kenya, kadib markii mucaaridka uu qaadacay inuu ka qeyb galo codbixinta.
Saraakiisha guddiga Doorashada ayaa bilaabay tirinta cododka, walow ay jiraan magaalooyin qaar oo shalay aysan ka dhicin wax codbixin ah sida magaalooyinka Kisumu, Homa Bay, Migori iyo Siaya.
Goobaha dib loo dhigay codbixinta illaa maalinta berito ah ee Sabtida ayaa ah goobihii ay ka dhaceen rabshadaha shalay, wuxuuna guddoomiyaha guddiga Doorashooyinka sheegay in codbixinta goobahaasi la qaban doono Sabtida.
Ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay mudaharaadyadii rabshadaha wateen oo shalay ka dhacay deegaanada ay ku xoogan yihiin mucaaridka sida magaalada Kisumu oo ay ku dhinteen ugu yaraan 2 qof oo banaanbax dhigayey, kuwaasi oo ay toogteen ciidamada Booliiska, kadib markii qaarkood xoog ku galeen goobaha loogu talo galay codbixinta iyo saldhig Booliis.
Guddoomiyaha Kisumu ayaa shaki geliyey in codbixinta ay beri ka dhici doonto magaaladaasi isagoo sheegay in shacabka ay ku jiraan baroordiiq. Wuxuuna ku casumay inay magaaladaasi soo booqdaan hogaamiyayaasha mucaaridka ee uu hogaamiyo Raila Odinga.
Labada qof ee kale ayaa la sheegay inay ku dhinteen magaalada Homa Bay iyo deegaanka Mathare ee dadka saboolka ah degenyihiin ka tirsan Nairobi. Goobahaasi ayey ka dhaceen iska horimaadyo dhexmaray taageerayaasha NASA oo banaanbax dhigayey iyo ciidamada booliiska oo awood u adeegsaday.
Diidmadii Raila iyo Guusha la hubo ee Uhuru
Go’aankii ay mucaaridka ku qaateen inaysan ka qeyb gelin doorashadan ayaa ah mid xaqiijineysa in si weyn uu codbixinta ugu guuleysan doono Madaxweynaha xilka haya ee Uhuru Kenyatta.
Goobaha codbixinta ka dhaceysay ayaa si weyn looga dareemayey tiro yarida dadka codkooda dhiibanaya, waxaana muuqata in badan oo kamid ah shacabka aysan codkooda dhiiban, taasi oo dhaawac ku noqon karta natiijo kasta oo soo baxda.